Ikhaya / Umhlahlandlela Wompompi / Ungayithenga Kanjani I-Faucet Entsha Yekhishi
2020 / 11 / 16 UkwahlukanisaUmhlahlandlela Wompompi 5387 0
Ukuthenga umpompi wasekhishini ofanele kuncike kakhulu kumapayipi akhona. Ukukhetha ompompi basekhishini abasha kungaba lula kunalokho ocabanga ukuthi uma ucabanga ngemininingwane emithathu ebalulekile ngaphambi kokuqala ukuthenga.
Kunemiklamo ehlukahlukene yompompi wasekhishini nosink etholakalayo, kepha akusho ukuthi iyahambisana. Qala ngokubheka usinki wakho wasekhishini ukuze ulawule ukuthi zingaki izikhala zokufaka umbhobho ongaphambi kokumba ezingatholakala. Lokhu kusebenza uma ufaka ompompi abasha kusinki osuvele ukhona noma uthenga umpompi nosink omusha ngokuphelele.
Imvamisa, ompompi basekhishini banesibambo esisodwa esizungeza ngokuqondisa ukukhuphula izinga lokushisa kwamanzi noma izibambo ezimbili zokuxuba amanzi ashisayo napholile. Okufakwe kulokhu isifutho esihlala eceleni noma sokudonsa noma sokudonsa phansi sinezinketho zokufafaza nokusakaza.
Ngaphandle kwezandla thenga ompompi online bese ufaka isici esisha ekhishini. Lokhu kungaba ukuthinta- noma ukunyakazisa ukunyakaza futhi kufaka phakathi kokubili isikhathi nokulawulwa kobuningi, okwenza la mapompi abe yindlela ephephile emakhaya anezingane. Abompompi abangenawo izandla basebenza kahle kakhulu ngombono wokuklama osakazekile, okwenza izindawo zokuhlala zitholakale kalula futhi zihlale kuwo wonke amazinga ekhono lomzimba.
Uma kwenzeka ipayipi lakho elikhona linepuleti lokufaka kulo, hlola ngaphansi kukasinki ukuze ubone ukuthi mingaki imbobo okufakwa kuyo ipuleti lokufaka. Khumbula okulandelayo mayelana nokufaka izikhala:
Ompompi basekhishini bangaba nomgodi wokufaka owodwa kuya kwemine.
Kusetshenziselwa izimbobo ezintathu kuspout nezibambo ezimbili.
Imbobo yesine ijwayele ukusetshenziselwa okokusebenza, njengesiphathi sesepha noma izifutho zesici.
Umpompi omusha ngamunye ukhombisa emaphaketheni ukuthi kudinga ukufakwa kwezimbobo ezingaki ukuze kufakwe.
Uma ufaka ompompi wesibambo esisodwa kusinki onezikhala ezintathu, isidlo sedeski ngokuvamile sizofihla amathuba angasetshenziswanga.
Indawo yezikhala zokufaka usinki enye into okufanele uyikhumbule. Imvamisa, usinki utholakala maphakathi nesinki yekhishi, kepha akusona njalo isimo. Uma ompompi bezonamathiselwa endaweni eyodwa yosinki wasekhishini, ispout kufanele sibe side ngokwanele ukuthola umcengezi ohlangothini oluthile ukuze lokhu kusetshenziswe. I-spout ephezulu enombhobho wokudonsa owehlayo kungenye indlela yokwenza usinki wasekhishini onemigodi yokufaka indawo.
Uzothola ompompi abakhweza phezulu nabaphansi. Oompompi abakhweza phezulu baxhuma ngaphakathi kwe-counter-top. Izikulufo zifakwa ngaphakathi kwephayiphu. Oompompi abangaphansi kokufakwa basuka kokuhle kakhulu kwe-counter-top. Izikulufo zifakwa ngokuhamba phambili kwengxenye yompompi.
Bheka Imigqa Yamanzi
Qiniseka ukuthi umpompi omusha wasekhishini owufunayo uyahambisana nolayini bomthombo wamanzi. Bheka ngaphansi kukasinki wakho ubheke ngaphansi kwephothi bese uqaphela ukuthi lukhulu kangakanani uchungechunge lwamanzi okuphuza akhona kanye namavalvu we-shutoff. Nayi eminye imihlahlandlela ongasebenza ngayo lapho ubheka imigqa yakho yokuphuza amanzi ne-valve:
Uma ungaqiniseki ukuthi ulayini wakho wamanzi ungakanani, uwaxazulule ngetheyiphu yokulinganisa.
Noma ungadinga ukuyizingela, isikali kufanele sigxilwe kwi-valve.
Qaphela ukuthi ikhaya elidala kungenzeka lingabi nayo i-valve evaliwe.
Amapayipi amaningi amasha afaka imigqa eguquguqukayo engu-3/8-intshi ehlanganisiwe. Uma ama-valve evaliwe okuvala amanzi ayi-1/2-in. ngosayizi, kuzofanele ushintshe ama-valve avaliwe abe ama-valve angu-3/8-intshi ngaphambi kokufaka ompompi omusha.
Kuyinto ehlakaniphile ukufaka ama-valve avaliwe lapho ufaka usinki omusha, noma kunjalo, ngoba i-valve yokuvuna ingahluleka uma ufuna ukuvala amanzi ngokuvuza noma okunye ukulungiswa.
Uma izimbobo zokufaka usinki ompompi wakho zingatholakala eduze kolunye uhlangothi lwesinki, qiniseka ukuthi ispout sakho side ngokwanele ukuthi ungangena futhi sifinyelele kolunye uhlangothi lwesitsha, ikakhulukazi uma ucwila kabili. Isixazululo esisodwa ukuthenga ispout eside ngokwengeziwe ngombhobho wokudonsela phansi. Lo mklamo ukufanele kahle ukwakheka kosinki wasekhishini ngezimbobo ezifaka ingxenye.
Ngisho nento ebonakala incane njengokugcina kokulungiswa kwamapayipi akho kungenza noma kwephule ubuhle basekhishini lakho. Kuneziqondiso eziningi. Umpompi wakho wasekhishini kufanele uhambisane nokuqedwa kwezinye izesekeli zasesinkini, kufaka phakathi umehluko omncane womoya wokuwasha izitsha, owokufaka insipho eyakhelwe ngaphakathi, kanye nezikhala zemigodi yokucwila yezikhala ezingasetshenziswanga. Ipayipi elinomphetho wokukhanya we-chrome okhazimulayo lizobukeka lingafaneleki uma zonke ezinye izinto ezinokuqedwa komhlaba ezine-matte brushed nickel.
Edlule :: Ungayikhetha Kanjani Ipayipi Lakho Lokugeza Olandelayo: UMHLAHLANDLELA WOKUTHENGA KAKHULU WABAKHULU
2021 / 01 / 10 1577
2020 / 12 / 21 6168
2020 / 11 / 19 5287